DAAWO: Video naxdin leh oo muujinaya cunsurigii seefta ku dilay Ahmed Hassan oo raadinaya cid uu gowraco | Somaliska
Daawo video naxdin leh oo muujinaya sida uu u dhacay weerarkii Bishii Oktoobar ee sanadkii hore lagu qaaday iskuulka Kronan ee ku yaala magaalada Trollhätan halkaasi oo uu lagu dilay wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Ahmed Hassan oo 15 sano jir ah. Ninka weerarka geystay ayaa lagu magacaabaa Anton Lundin Pettersson oo da’diisu tahay 21 jir kaasoo ay boolisku toogasho ku dileen intii uu weerarku socday.
Videowga ayaa muujinaya sida uu ninkaan cunsuriga ah u raadinayo ardada isaga oo qaasan la sheegay in uu bartilmaameed ka dhiganayay ardada Soomaalida ah iyo kuwa kale ee ajaanibta ah.
Booliska ayaa shalay soo saaray warbixin ku saabsan baaritaankii ay ku sameeyeen weerarka, iyagoo soo gunaanaday in aysan cid kale ku lug lahayn weerarka oo uu wiilkaan keligiis mudo 2 isbuuc ah qorsheynayay. Waxay intaasi ku dareen in uu ninkaan doonayay in uusan noolaan oo qorshahiisa uu ahaa in uu geysto dil badan inta ay boolisku isaga qaarajinyaan.
Si kastaba ha ahaatee, booliska ayaa qeybo ka mid ah baaritaankooda oo ay ku jidho warqad dardaaran ah oo uu qoray cunsuriga waxay ka dhigeen mid sir ah oo aan shacabka iyo saxaafada loo ogoleyn in ay arkaan.
Hadalka booliska ayaa ah mid aan la aqbali karin maadaama la hubo in ninkaan uu akhrisan jiray websiteyada cunsuriyiinta oo uu taageero uu ka helay cunsuriyiint xitaa haddii ay ahaan lahayd dhiiri galin iyo af oo keliya. Mida kale waa maxay sababta ay u qarinayaan qeybo ka mid ah baaritaankooda haddii aysan meesha wax ku jirin?
Wax wanagsan maha wax xun horay u dhacay oo dadka o dhan wada ogyihiin inaa marlabaad soo gudbiso. Sababta, dad ayaa caruur kaga dhimatay meesha marka waxaano kale marka ey sii dawadaan ciil iyo niyo jab ayaa kusii dhacaya.